ငွေစက္ကူအဟောင်းအနွမ်းများ​ရောဂါများ​။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ငွေစက္ကူအဟောင်းအနွမ်းများ​ရောဂါများ​။
Posted by thit min on Sep 22, 2011 in Health & Fitness, News |2comments
ရောဂါပိုးမွှားများပါဝင်သည်ကိုတွေ.ရှိရကြောင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံပြည်သူ့ကျန်းမာ ရေးအင်စတီကျူရဲ့မိုက်ကခရိုဇီဝနည်းပညာဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်ချက်တွေအရ(microbiological laboratory testsat the Institute of Public Health (IPH)) စူးစမ်းရှာဖွေလေ.လာသူသုတေသီပညာရှင် များကတွေ.ရှိခဲ့ကြောင်း သိရှိရ သည်.”The indenpendence” သတင်းစာမှာပါတဲ့ သတင်းလေးတစ်ခုပြန်တင်ပြချင်ပါတယ်….
အခြေအနေကတော.အတော်.ကိုဆိုးရွားပါတယ်၊အထူးသဖြင်.လူတွေအများဆုံးသုံးနေကြတဲ.တန်ဖိုးနည်းငွေစက္ကူတွေမှာ ပိုပိုးရောဂါပိုးတွေတွေ.ရပါတယ်လို. လည်းအဲဒီပညာရှင်ကဆက်ပြောပါတယ်။ငွေစက္ကူအကြွေတွေရှားပါးလာလိုအဲဒီငွေစက္ကူတွေပိုမိုဆုတ်ပြဲဟောင်းနွမ်းလာရတာဖြစ်ပြီးအနားတွေဖွာလာတာတို.ဆုတ်ပြဲလို.တိပ်နဲ.ကပ်ထားတာတို.ကလည်း ရောဂါပိုးမွှားတွေကိုပွားများစေဖို.ပိုဖြစ်စေတယ်လို.ဆိုပါတယ်။
ဓါတ်ခွဲခန်းမှာစမ်းသတ်ခဲ.တဲ.ငွေစက္ကအဟောင်းအနွမ်းအဆုတ်အပြဲ အရွက်၇၀ ရဲ. ၈၀ရာခိုင်နှုံးကျော်မှာတီဘီရောဂါဖြစ်စေတဲ.ပိုးမွှားတွေတွေ.ရပြီး ၆၅ ရာခိုင်နှုံးကတော.အဆုတ်အအေးမိရောဂါ၊လည်ချောင်းယောင်ရောဂါနဲ.အစာအိမ်ရောဂါတို.ဖြစ်ပွားစေတဲ.ပိုးမွှားတွေ တွေ.ရပါတယ်တဲ. …
စိတ်အေး စရာ တစ်ကွက်မှ မရှိတော့ပါလားကွယ်တို့…
ကျုပ် က ကွမ်းစားတယ်ဆိုတော့က
ကွမ်းယာသည် များ ကွမ်းယာ..ယာနေစဉ်
ပိုက်ဆံ အမ်း၊ပိုက်ဆံယူ တာလုပ်ရင်
အသစ်ထပ်ယာ ခိုင်းရတယ် ဗျ ။
ဝမ်းသာစရာ ကောင်းတာ တစ်ခု က
ကျုပ်တို့ ဘိရုမာ တွေ ဟာ
ပါမွှားပဲ ဗျို့ 